Umlawuli weMveliso yeMatriki | I-JLH Matress
IIMPAWU ZE-JLH ZAMNYE
JLH kwi # 1 ye-Kangtai South Road, Shatou Industrial Park, kwiSithili saseNanhai, isiXeko seFoShan, kwiPhondo laseGuangdong, eChina. Iimveliso eziphambili iJLH IIMveliso eziNtsha ze-Arcade. Ngamaxabiso okhuphiswano, eyethu ithandwa kakhulu neyenza ukuba iJLH ikwazi ukukhuphisana ngakumbi. Yenziwe ngomgangatho weprimiyamu, imveliso yeJLH ibonakaliswe ukuba ihlala ixesha elide kusetyenziswa emva kovavanyo kwaye inobomi obude benkonzo kunale yendabuko. Imveliso ifumana izincomo ezininzi: ikhangeleka ithambile, inesitayile kwaye ilungile. Ukuphucula ubushushu jikelele.
I-21CA-09 yeCustomer eQokeleleneyo yoQinisekiso eQinisekayo yeXabiso eliKhulu
JLH kwi # 1 ye-Kangtai South Road, Shatou Industrial Park, kwiSithili saseNanhai, kwiSixeko saseFoshan, kwiPhondo laseGuangdong, eChina. Iimveliso eziphambili i-21CA-09 yeyona Kona yexabiso eliQhelekileyo yoQokelelo lwePokotho yeThole. Imveliso incinci amathuba okuba iqokelele intsholongwane. Izixhobo ezisetyenzisiweyo zibonisa iipropathi ezinamandla ze-antibacterial ezinokunciphisa ukukhula kweebacteria. Imveliso iyaphakama kwindalo enezindlu zayo zentsimbi ezimagqabhu kunye nesigqubuthelo sokukhanya shatterproof. Inobomi obude bokusebenza ngenxa yesakhiwo sayo esomeleleyo. I-JLH yenzelwe ngokufanelekileyo liqela labaqulunqi abaziingcali. Zigcwele ziingcamango ezintsha kwaye zamkela ukutshintsha kweemarike zokukhanya kwe-LED.
Iimpawu ezimbini zePocket Spring Matress
JLH kwi # 1 ye-Kangtai South Road, Shatou Industrial Park, kwiSithili saseNanhai, kwiSixeko saseFoshan, kwiPhondo laseGuangdong, eChina. Iimveliso eziphambili Iibhloko ezimbini zePocket Spring Matress. Ngokusebenzisa uyilo oluphakamileyo, esona sicelo sibonisa ukuba indleko eziphantsi kunye nobomi benkonzo ende. Imveliso inesistimu yokutsala amanzi ukuze ifumane ifuthe kwisithende kunye ne-arch, ngenxa yoko inika isiqabu sobuhlungu kwabo banxibayo. Imveliso kulula ukuyigcina. Abantu banokusebenzisa ilaphu elomileyo ukusula uthuli kwaye bajonga rhoqo ukuba ngaba kukho naziphi na iintambo ezonakeleyo.
Umenzi wase China China Base Base
Fumana ulwazi ngakumbi! Iinkcukacha malunga nesiseko sebhedi, inkxaso kwisiseko sebhedi.
124 izimvo· December 02.2020 78